Electronics Industry - Luoyang kokuzihlanganisa Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
Kokuzihlanganisa Tungsten molybdenum
Molybdenum ITHUSI Ingxubevange
Molybdenum Ukubhoboza MANDREL
DENSITY HIGH Tungsten Ingxubevange
Tungsten Carbide Ingxubevange
Aviation Futhi Defense
Amandla Distribution Futhi Transmission
Excellent conductivity ezishisayo, ukuvaleka kwegebe elawulwa sokwanda ezishisayo nobumsulwa impahla oluvelele. Ngokuphelele ecacile: Imikhiqizo yethu electronics umkhakha babe anezakhi ezikhethekile kakhulu ngokomzimba. Isetshenziswa njengesici base amapuleti ukushisa spreaders, bona ukuqinisekisa nokwethenjelwa zikagesi.
Uma uthi nhlá, yokuthi izingxenye kagesi ukukhiqiza ukushisa ngeke Ubonakala yini okufanele ukhathazeke ngakho. Namuhla, cishe noma yimuphi wesikole angakutshela ukuthi izingxenye ikhompyutha bayofudumala ngenkathi esitshalweni. Phezu kokuba idivaysi yakho isebenza, okuyisibalo we enikeziwe energy kagesi elahlekile njengoba ukushisa. Kodwa ake sihlolisise: Ukudluliswa ukushisa kungabuye wezwakalisa njengoba ukushisa yokucucuza iyunithi (of) endaweni (ukushisa yokucucuza ukuminyana) ngayinye. Njengoba izibonelo kugrafu Ngokwesibonelo, kwabantu ukushisa yokucucuza e izingxenye eziningi electronic kungaba kakhulu. Minengi umphimbo rocket umlomo wombhobho lapho kungase kuphakame okushisa njengoba eliphezulu 2 800 ° C.
I Coefficient ukunwetshwa ezishisayo ngokomzimba esinye isici esidinga ezibucayi ngazo zonke Semiconductors. Uma Semiconductor kanye material base ipuleti ukunwebeka nokuncipha ngamazinga angefani lapho zihlatshwa kushintsha izinga lokushisa bese kuphakama ekucindezelekeni lokukhanda. Lezi kungalimaza Semiconductor noma ukukhinyabeza ukuhlobana chip kanye spreader ukushisa. Nokho, izinto zokwakha zethu, uyazi wena ezandleni ephephile. izinto zethu Coefficient elikhulu ukunwetshwa ezishisayo ngokujoyina Semiconductors futhi izitsha zobumba.
Njengoba base Semiconductor amapuleti, isibonelo, izinto zethu asetshenziswa ophephela abaphehla ugesi, izitimela izicelo ezimbonini. Ngamandla Semiconductor amamojuli ngoba inverters (thyristors) namandla diodes, badlala indima ebalulekile. Kungani? Ngenxa Coefficient zabo elikhulu ukunwetshwa ezishisayo kanye esihle conductivity ezishisayo, base Semiconductor amapuleti yakha isisekelo esiqinileko ukuze ebucayi Silicon Semiconductor futhi ukuqinisekisa impilo inkonzo module of engaphezu kwengu-30.
Heat spreaders futhi base amapuleti wenza kusukela molybdenum, i-tungsten MoCu, WCu, Cu-MoCu futhi Cu-MoCu-Cu laminates thembeke ukudamba ukushisa e izingxenye kagesi. Lokhu kokubili kuvimbela okweqile amadivayisi kagesi kanye kwandisa isikhathi sokuphila umkhiqizo. ukushisa yethu spreaders ukusiza ukugcina indawo epholile, isibonelo, IGBT amamojuli, RF amaphakheji noma chips LED. Sithuthukise material ekhethekile kakhulu MoCu esiyinhlanganisela ukuze amapuleti othwala chips LED. Lokhu ukuvaleka kwegebe ukunwetshwa ezishisayo esifana nesika-isafire futhi izitsha zobumba.
Sisabalalisa imikhiqizo yethu ukuze electronics umkhakha nge ezihlukahlukene ezinengilazi. Zivikela izinto ngokumelene ukugqwala futhi sithuthukise uxhumano solder phakathi Semiconductor futhi impahla yethu.
molybdenum Rod, molybdenum Plate, Tzm Sheet, molybdenum Ishidi, molybdenum, Tzm Plate,